Ny Transcend JetDrive 825 SSD dia mamela azy hampiasaina ivelany nefa koa SSD anatiny | Avy amin'ny mac aho
Ny Transcend JetDrive 825 SSD dia mamela azy hampiasaina ho toy ny SSD ivelany nefa koa anatiny
Ny indostrian'ny fitaovana ho an'ny Mac dia tsy mitsahatra ny manaitra anay, izay ankafizinay. Ny fanapahan-kevitra hanitatra ny fahatsiarovana ao amin'ny Mac antsika, dia mandalo amin'ny fanapahan-kevitra raha ny manitatra ny fahatsiarovana anatiny na ivelany no zavatra tena ilaina indrindra isan'andro. Raha tsy mahatratra 1GB ny fanitarana, angamba ny safidy tsara indrindra dia ny manitatra ny fitadidiana anatiny. Etsy ankilany, raha misy antony maro hafa ilainao habetsaky ny habetsaky ny antony dia mahaliana kokoa ny manana fitadidiana ivelany.
Androany dia fantatsika ny fahatsiarovana Transcend JetDrive 825, de vonona ny hampiasa azy ho SSD ivelany sy anatiny, misaotra ny kit ny fifandraisana izay ananany ao anatiny.
Rehefa nalainay avy tao anaty boaty ny Transcend JetDrive 825, azo ampiasaina avy hatrany ho drive SSD ivelany. Hitanay avy hatrany fa nisy izany Thunderbold 2, ary noho izany azo ampiasaina bebe kokoa. Ity kapila ity dia ampidirina ao amin'ny JetDrive 820 PCIe Gen3 x2 Drive. Io no mpampitohy iray ihany ary manana refy mitovy amin'ny fahatsiarovana novokarina nanomboka tamin'ny 2013. Ohatra iray ireto:
MacBook Air 11-inch manomboka amin'ny tapaky ny taona 2013 ka hatramin'ny fiandohan'ny taona 2014.
MacBook Air 13-inch manomboka amin'ny tapaky ny taona 2013 ka hatramin'ny 2017.
MacBook Pro 13-inch manomboka amin'ny Far 2013 ka hatramin'ny voalohan'ny 2015.
15-inch MacBook Pro manomboka amin'ny faran'ny 2013 ka hatramin'ny tapaky ny 2015.
Mac mini tamin'ny faran'ny taona 2014, ary
Mac Pro hatramin'ny faran'ny 2013.
Noho izany, Ity singa ity dia tonga lafatra amin'ny fanitarana fahatsiarovana ireo solosaina izay misy 128Gb ary fahatsiarovana 256GB azaAzontsika atao ny manitatra ny fahatsiarovana amin'ny Transcend JetDrive 825, hatramin'ny 960GB ary manohy mampiasa ny fitadidiantsika ankehitriny ho fiara ivelany.
Mba hanaovana izany dia tsy maintsy mamerina sy manaisotra ny kapila SSD amin'ny Transcend JetDrive 825 isika ary esory ny Mac hanoloana ny SSD. Tadidio fa tena zava-dehibe ny fanaovana kopia backup alohan'ny hanombohana ny fizotrany. Raha vantany vao nosoloina iray hafa ny iray ary nampidirina tao anaty kapilan'ny Mac misy antsika ao anaty fiara Transcend JetDrive 825, azontsika atao ny mampifandray azy ho toy ny fiara ivelany. Ny fananana Thunderbold 2 fa tsy Thunderbold 3 dia ahafahantsika mampiasa azy amin'ny Macs isan-karazany.
Farany, manana ny singa JetDrive 820 izay mampiasa làlan'ny PCIe roa, mahatonga antsika hanana hafainganana. SSD nentim-paharazana, mahazo hafainganam-pandeha 450MB / s vakiana ary 415MB / s manoratra. Fa kosa, ny SSD mpisolo toerana dia mahazo vakiana 850MB / s ary mihoatra ny 820MB / s manoratra. Ny fanovana dia lehibe kokoa noho ny milina taloha.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » maro » Ny Transcend JetDrive 825 SSD dia mamela azy hampiasaina ho toy ny SSD ivelany nefa koa anatiny
UE Wonderboom, kalitaon'ny feo ary hery amina mpandahateny azo entina